बालबालिकाको विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको भन्दै पत्रकार न्यौपाने सम्मानित
काठमाडौँ । पत्रकार तथा लेखक दामोदर न्यौपाने सम्मानित भएका छन् । विश्व अटिजम अवारनेश दिवसको अवसर पारेर न्यौपानेलाई विशेष स्कुल तथा अपाङ पुनर्स्थापना केन्द्रले सम्मान गरेको हो । स्कुलले अटिजम क्षेत्रमा सहियोग गर्नेहरूलाई सहयोग गरेको हो । न्यौपानेसँगै पत्रकार रामकला खड्का, दिपक समीर सहितलाई राष्ट्रिय
काठमाडौं । गीता रेग्मीद्वारा लिखित नियात्रासङ्ग्रह ‘पत्थरै पत्थर’ राजधानीको कालिकास्थानस्थित सर्वनाम थिएटरमा लोकार्पण गरिएको छ । प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, साहित्यकार गीता केशरी, डा. सावित्री कक्षपती, नियात्राकार मोहन चापागाई, साहित्यकार राजकुमार राई, थाई नेपाल संघका अध्यक्ष कुमार कार्की, शिक्षा मन्त्रालयका
विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन साउनमा बेलायतमा हुने
काठमाडौँ । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, विश्व केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘दोस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन’ आगामी साउन २६–२७ गते बेलायतमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनका निम्ति केन्द्रीय सचिव केदार संकेतको संयोजकत्वमा ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष विश्वासदीप तिगेलाले
एक वर्षको योजनाको काम पाँच महिनामै सकिएपछि...
म्याग्दी । एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङद्वारा सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको नदी नियन्त्रण योजनाको काम लक्ष्यभन्दा सात महिनाअघि नै सकिएको छ । सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइलगायत म्याग्दीमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजना
अस्ताए कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुष्टि गरेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका खड्का मृगौला रोगबाट पीडित थिए । प्रवक्त शर्माले ट्विट गर्दै भनेका
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण चैत २३ बाट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतदेखि ३ दिने भारत भ्रमण गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको तीन दिने भारत भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा ओलीको भ्रमण तय भएको परराष्ट्र
मिडियाको विश्वसनियता वढाऊ
चन्द्रदीप राई,काठमाडौं । नेपाली मिडियाको सङ्ख्या वढेपनि गुणस्तर वढन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा मिडिया निकै खुलेपनि तिनका समाचारप्रति जनविश्वास वढन नसकेको वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले दाबी गरे । नेपाल पत्रकार महासंघको ६३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय तिलगंगामा आयोजित
'आर्थिक सशक्तिकरणका लागि महिला आफैं अग्रसर हुनुपर्छ'
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक सशक्तिकरणका लागि महिला आफैं अग्रसर हुनु पर्ने बताएका छन् । वुमन एक्ट र नेपाल बैँकर एशोशिएसनले राजधानीमा गरेको ‘महिला आर्थिक सशक्तिकरणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्भनर नेपालले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका
२०७५ सालमा सार्वजनिक विदा ८९ दिन मात्र !
काठमाडौँ । सरकारले २०७५ सालको सार्वजनिक विदा कटौती गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले विदा कटौतीको निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै २०७५ सालमा सरकारी कार्यालय २२ दिन बढी खुल्ने सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । ‘सरकारले सम्बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ र यसका लागि कार्यदिवस
राष्ट्रपतिले भण्डारीले आज संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने भएकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको मिति तय गरेको थियो । भण्डारी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्न
काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू हेममणि सुवेदी तथा नारायण खरेलले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ। नवनियुक्त
कटौती हुँदै सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ । सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गर्ने तयारी गरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । समाचार अनुसार, २२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । धेरै सार्वजनिक बिदा दिँदा काम गर्ने समय कम हुने र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल
नेपाली भाषा–साहित्यका विशिष्ट साधक वासुदेव त्रिपाठी ७६ औं वर्षमा प्रवेश
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । नेपाली भाषा–साहित्यका विशिष्ट साधक प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी ७६ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । प्रा.डा वासुदेव त्रिपाठी अभिनन्दन तथा ग्रन्थ प्रकाशन समिति र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रा.डा त्रिपाठीको ७६ औं जन्मोत्सव मनाएको हो ।
उप–प्राध्यापक अर्याल प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार एवम् रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयका उप–प्राध्यापक कुन्दन अर्याल नियुक्त भएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने गरि अर्याललाई
काठमाडौँ । राजधानीको जमलबाट आइतबार सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानिएको छ । मच्छिन्द्र बहालबाट बाजागाजासहित सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई साँझको साइतमा रथारोहण गरेपछि रथयात्रा सुरु भएको थियो । रथयात्रामा राजधानी काठमाडौंका विभिन्न भू–भागबाट बाजा गाजासहित नेवारी समुदायको सहभागी भएका थिए । सेतो मच्छिन्द्रनाथको
भूमिसुधारका सुब्बा १० हजार घुससहित पक्राउ
भक्तपुर । भूमिसुधार कार्यालय ब्यासी, भक्तपुरका नायब सुब्बा कमल भुजेल घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । उनी सेवाग्राहीबाट १० हजार रूपैयाँ घुससहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अायोगको टोलीबाट पक्राउ परेका हुन् । चाँगुनारायण नगरपालिका-८ मा जग्गाको मोही कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उनीले सेवाग्राहीसँग
बार राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि,स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मुद्दा प्राथमिकतामा
नेपालगन्ज । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार एसोसिएसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि नेपालगन्जमामा सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे मौन बसेको भनेर चर्को आलोचना र भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेकै बेला नेपालगन्जमा १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश
९ हजार रुपैयाँ घुससहित शाखा अधिकृत इन्दिरा पक्राउ
८ चैत, काठमाडौं । घरेलु उद्योग दर्ता गर्न लिएको घुस रकमसहित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय त्रिपुरेश्वरकी शाखा अधिकृत इन्दिरा गौतम (खनाल) पक्राउ परेकी छन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ९ हजार रुपैयाँ घुससहित बुधबार कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं हिडेन ट्रेजर नामको सिलाई
कोरियन भाषा परीक्षा फारम आजबाट
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ मार्फत् जाने कामदारका लागि कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन आजबाट खुलेको छ । ईपीएसअन्तर्गत सन् २०१९ मा कामका लागि दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदार छनोट गर्न लिइने नवौं चरणको कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आजदेखि संकलन गरिएको ललितपुरस्थित
विमान दुर्घटना विमा : १० करोडसम्म पाउने
काठमाडौँ । यूएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेका परिवारले पाँच लाखदेखि १० लाख अमेरिकी डलर (पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ) सम्म विमा पाउने देखिएको छ । दुर्घटनाका पीडितले मन्ट्रियल सन्धिको आर्टिकल ३१ ले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको असीमित दायित्वअन्तर्गत बिमा दाबी गर्दा ठूलो रकम पाउने
को बन्ला नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी ?
काठमाडौँ । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई समाचार बनाएर छापेका छन् । राजनीतिकदेखि आर्थिक, सामाजिकसम्मका विषयलाई पत्रपत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा महत्त्व दिएर छापेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ७ अर्बको सामानमा भन्सार छलीलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । निजी विद्यालयमा
कांग्रेस प्रमुख सचेतमा खाँण
काठमाडौँ । सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा बालकृष्ण खाँणलाई नियुक्त गरेका छन् । खाँण पार्टी सभापति देउवाका विश्वास पात्र मानिन्छन् । खाँण प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट सांसद बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना सांसद छन् ।
५ नं प्रदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोग गठन
बुटवल- प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ जारी गरी प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता
पराजुली विरुद्ध प्रहरीमा उजूरी, ‘सिलवाल’ प्रकरणको झल्को
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नागरिकता र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा जालसाझी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजूरी दर्ता गरिएको छ । गुल्मी इस्पा गाउँपालिकाका मदन भण्डारीले पराजुलीले पराजुलीले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मिति सच्याएको भन्दै उनी विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर
रुसको राष्ट्रपतिमा पुनः पुटिन निर्वाचित
काठमाडौँ । रुसको नयाँ राष्ट्रपतिमा पुनः भ्लादिमीर पुटिन निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रपति चयनका लागि हिजो सम्पन्न मतदानमा भ्लादिमीर पुटिनले अर्को कार्यकालका लागि जित हात पारेका हुन् । सम्पूर्ण स्थानको मतगणना सकिनै लाग्दा पुटिनले करिब ७६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको त्यहाँको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई उदृत
काठमाडौँ । साढे दुई वर्षअगाडिको ‘टीकापुर घटना’ का मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै’ प्रतिनिधिसभा सांसदको शपथ गराउने तयारी भएको छ। सरकारले त्यसको वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूसँग छलफल थालेको छ। राजपाको मागका आधारमा सरकारले चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ
उपराष्ट्रपतिमा पुन दोस्रो पटक पनि निर्वाचित
काठमाडौँ । नन्दबहादुर पुन दोस्रो पटक पनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा पुनको मात्र उम्मेदवारी कायम भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको
छायाँ सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा !
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकलगत्तै छायाँ सरकार गठन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन छायाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो । संसदीय दलको विधानमा नै छायाँ सरकारको प्रावधान
चीनको राष्ट्रपतिमा फेरि सि
बेइजिङ । चिनियाँ वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङ नै फेरि निर्वाचित भएका छन् । चीनको संसदमा शनिबार बिहान भएको निर्वाचनबाट सि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । केन्द्रिय सैन्य आयोगको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएका सि हाल ६४ बर्ष भएका छन् । उनले निर्वाचित भएलगत्तै संविधानअनुसार ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा
नेपाल आठौं स्थानमा सीमित
काठमाडौँ । नेपाल, एकदिवसिय विश्वकप क्रिकेट छनौट प्रतियोगिताको आठौं स्थानमा सीमित भएको छ । जिम्बावेमा सातौं स्थानको प्ले अफमा नेदरल्याण्ड्ससँग ४५ रनले पराजित भएपछि नेपालले प्रतियोगिता आठौं स्थानमा रहँदै सकेको हो । यद्यपि, दुई दशक लामो क्रिकेटको इतिहासमा सोही प्रतियोगिताबाट नेपालले वान डे क्रिकेटको